Yintoni ukubuyela umva kunye nokuphosa umva? | Ezezimali
Yintoni ukubuyela umva kunye nokuphosa umva?
Omnye wemibuzo ophakanyiswe yinxalenye enkulu yabatyali mali yimicimbi enento yokwenza ne uhlalutyo lobugcisa. Kwaye phakathi kwabo kugxininisa ulwazi lwento kwaye kuthetha amanani njengophawu lokutsala umva kunye nokuphosa kunye nendlela thatha inzuzo kuzo ekusebenzeni yenziwe kwiimarike zezabelo. Kananjalo nefuthe abanalo, phakathi kwezinye zezona zinto zibalulekileyo. Kungenxa yokuba banokukunceda ngaphezulu komzuzu omnye ukuchaza iintshukumo oziphuhlisayo kwimarike yemasheya ukusuka kule mizuzu.
Ngaphambi kokuya ngokupheleleyo kwinkcazo yakhe, kufanele kuqatshelwe ukuba zombini ukubuyela umva kunye nokuphosa inokuba ngamanani anomdla kakhulu ekumiseni ngokusesikweni ukuthenga nokuthengisa izabelo engxoweni. Ukunikezela nangayiphi na imeko izikhokelo zokungena kunye nokuphuma kwiimarike zezabelo. Ewe baya kuba sisixhobo esinamandla sokukunceda ukuba wonge imali yakho. Ngempumelelo enkulu kwimisebenzi nganye elawulwa phantsi kwesi sicwangciso sotyalo-mali.
Ngapha koko, eyona ngxaki inkulu ekhoyo yokusetyenziswa kokutsala umva kunye nokuphosa emva kukuba bafuna i Inqanaba lokufunda ukuba ayingabo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi okwangoku. Kuya kufuneka uzame la manani abalulekileyo kwimarike yemasheya ngokusebenza ngokukuko. Ngaphandle kokubeka imali yakho emngciphekweni ongeyomfuneko onokukunika ngaphezulu kokungathandi ukusukela ngoku. Nangona kunjalo, unokuyilungisa le ngxaki ngoku ezi nkcazo zilandelayo.
1 Ukutsala umva njengoyena mntu uphambili
2 Usebenza njani kulo mzobo?
3 Inkcazo yezobuchwephesha yokutsala umva
4 Yintoni ukuphosa?
5 Injongo yezi ntshukumo
Ukutsala umva njengoyena mntu uphambili
Eli nani lemarike yemasheya kubalulekile ukuba ubuyele uyokuqhuba imisebenzi kwimakethi yesitokhwe ukhuseleko olukhulu kwaye ukwazi ukulusebenzisa ngokupheleleyo. Ewe, ukutsala emva kubaluleke kakhulu intshukumo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo Lenza ntoni ixabiso leasethi emva kokuphulukana nendawo yenkxaso ekwindla lalo. Kulula ukuyifumana kuba le ndawo ibonakala kubo bonke abatyali mali kuba ikumanqanaba achazwe kakuhle kwigrafu. Oko kukuthi, imalunga nokuhamba ubuyela kulaa nkxaso ilahlekileyo okanye into efanayo, kukubuyela kwixabiso lokuqala.
Ukutsala umva kuhlala rhoqo kwaye ke ngekhe ukwazi ukudibanisa ne- Utshintsho lwendlela, njengoko kunjalo kubatyali mali abanamava amancinci kolu hlobo lomsebenzi. Kwelinye icala, inamandla aphezulu kakhulu, anamandla ngakumbi kunangaphambili kwaye anokusetyenziselwa ukungena okanye ukuvula izithuba kwisitokhwe esichaphazelekayo zezi ntshukumo zikhethekileyo. Nangona kunjalo, ukuba inqanaba lenkxaso laphukile, ukubuyela umva kuye kwarhoxiswa ukuqala ukukhula kwinqanaba elitsha le-bearish.
Usebenza njani kulo mzobo?
Kuzo zombini iimeko, ukutsala umva kufuna unyango olwahluke kakhulu ukuba ufuna ukulusebenzisa kakhulu ukusukela ngoku. Kuba ngenene, awungekhe uyilibale loo nto ubude bayo bukhawuleza kakhulu kuba yenzeka kwiiseshoni ezimbalwa kakhulu zokurhweba. Le yenye yeempawu zayo ezifanelekileyo kwaye yintoni eyahlula kwamanye amanani emarike yemasheya. Iluncedo kakhulu ekuzuzeni inzuzo enkulu kwixesha elifutshane kakhulu kwaye ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo inkangeleko yabo. Ziyaboniswa kwiigrafu apho kuvela khona amaxabiso esitokhwe.
Kwelinye icala, kubaluleke kakhulu ukuba ukubuya umva kungoyena mntu ubalaseleyo ekwenzeni izilungiso kwipotifoliyo yezokhuseleko. Kuba xa ixabiso libuyile kwindawo apho ukwenziwa kwenziwa khona, ibuyela kwi indawo encinci apho ixabiso libuye kwakhona. Ngenxa yolu hlobo lukhethekileyo, ekugqibeleni isiphumo esikhawulezileyo kukuba umgca we-downtrend wophukile. Kuthetha ntoni ukusasazwa kwezi ntshukumo? Ewe, into elula njengaleyo sijongane nophawu olomeleleyo lwentshukumo ephezulu abanokuthi bangayiphosi abatyali mali.
Inkcazo yezobuchwephesha yokutsala umva
Ukuhamba kwemarike yemasheya ngokusisiseko kuthetha ukuba indlela yokuziphatha yenziwa ngokusesikweni kwizigaba ezine kude kufike ixabiso lokuqala. Ngamanye amagama, indawo apho abatyali-mali abanamava ngakumbi kwiimarike ze-equity babiza ukuphuma. Ukuya kwinqanaba lokuba lulwazi olubaluleke kakhulu ukwenza iintlobo ezimbini zokuhamba esikubhengeza ngezantsi.
Elona xesha lilungileyo apho unokufumana khona uthenge ukhuseleko ngeenjongo zokwenza inzuzo kumanqanaba aphezulu okwoneliseka.
Kwinqanaba apho kuya kufuneka ulungelelanise ukungena kwi Ixabiso ngaphezu kohlengahlengiso ukuyithengisa ngexabiso elingcono ngexesha lokurhoxisa izikhundla kukhuseleko oluchaphazelekayo kweli nani.
Ukusuka kwimeko enjalo, enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekufuneka zihlalutyiwe kukuba kubaluleke kakhulu ukuvavanya ukuba ingahamba kangakanani. Kuba enyanisweni, amathuba abanzi kakhulu kwaye kunzima kakhulu ukuwabeka umda okanye ubalathise kwixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi elichaziweyo. Ayilolize, ukuba ukutsala emva kuphawulwa yinto, kungenxa yokuba yenye yamanani kulula ukubona. Esi sesinye sezibonelelo eziveliswe kukusebenzisa esi sicwangciso kutyalo-mali kwaye sinokuphuhliswa ngaphandle kweengxaki ezigqithileyo, nditsho nakubatyali mali abanamava amancinci kolu hlobo lwemisebenzi ekhethekileyo kwaye iluncedo kwimidla yabo.
Enye into eyahlukileyo kakhulu ngumxholo weli nani lemarike yemasheya kwaye inegalelo kuthotho lokwahluka ekulula kakhulu ukuluqonda. Kodwa kwangaxeshanye kunenzuzo enkulu yokwenza igalelo lemali kwicandelo lemarike yemasheya linenzuzo. Njengakwinani langaphambili lemarike yemasheya, sisixhobo esifunekayo umjelo wokuthengwa nokuthengiswa kwezabelo engxoweni. Ke ngoko, ukusebenziseka kwayo kuphindwe kabini, njengoko uza kuba nakho ukubona ngezantsi. Ukuze ngale ndlela, ungathatha ezona ndlela zibalulekileyo kwiimarike zezabelo.
Kungenxa yokuba ayinakulityalwa ukuba inani elibizwa ngokuba yi-throwback lenziwe njengentshukumo echasene neyangaphambili. Oko kukuthi, umahluko kulula kakhulu ukuxhasa, kuba ukutsala emva kuyinto ukubuyela umva emva kokuphuma kuye kwicala elingelolakho, ngelixa ukuphosa umva kukuhamba kwakhona emva kokuqhekeka uye kwicala elingaphezulu. Ke isicelo sayo sikukuchasana, kuba ineentsingiselo ze-bearish kwaye sisilumkiso esicacileyo sokuthengisa izabelo onazo kwipotifoliyo yakho.
Kwelinye icala, kulula ukuyifumana njengakwimeko yokutsala umva kwaye unokubhideka kuphela notshintsho olwehlelayo ngenxa yokuthengisa uxinzelelo kubatyali mali. Enye impazamo abasebenzisi bezorhwebo abanokuyenza kukuba banokucinga ukuba ixabiso liyaphula ukumelana okanye inqanaba lenkxaso. Kungenxa yokuba bakwindawo yokudideka okanye ngokulula zichonge uninzi lwezalathi kunye nee-oscillators zohlalutyo lobuchwephesha, ezinje nge-RSI, iMACD okanye iBollinger Bands, phakathi kwamanye amanani afanelekileyo kwimarike yemasheya. Esinye sezitshixo zokusebenzisa ulwazi olunokusinika la manani kukwazi ukwahlula ngokucacileyo. Ayothusi into yokuba uya kube ufumene umhlaba omninzi xa kufikwa kwisicelo sakho ekusebenzeni kwakho kwiimarike zezabelo.
Injongo yezi ntshukumo
Ngayiphi na indlela, inqaku elinye oza kuthi uliqwalasele ngalo mzuzu kanye yile njongo la manani abalulekileyo kwimarike yemasheya ayibekayo. Ewe, ungaze ulibale ukuba ezi ziintshukumo ezibuyela umva. Apho ukuqhekeka okuthile inqanaba lamaxabiso obuchwephesha. Ngaphezulu kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwaye yiyo loo nto ziluncedo kakhulu kwimisebenzi yorhwebo efuna ukubonakaliswa okukhulu ekuqinisekiseni ulwalathiso lwentshukumo kwaye ukuba ngaba kukho naluphi na uhlobo lotshintsho kwixabiso lezokhuseleko.
Kwelinye icala, kwaye okokugqibela, ukubonisa ukuba la manani lithuba elihle lokwenza imisebenzi yokuthenga kunye nokuthengisa kwezokhuseleko kwimalike yamasheya. Ngale ndlela, ukuba into esijongane nayo kukubaleka okuqhubayo, ukuphoswa emva kuthetha ukuba lelona xesha lilungileyo loku phuhlisa ukuthengwa. Ngelixa ngokuchaseneyo, ukuba sikwi-bearish, ukubuyela umva ngumqondiso ofuna ukuthengisa ukuthengisa. Ngenxa yokuba ubeka umngcipheko omkhulu wokuba amasheya aya kukonyusa ukuwa kwawo ngobundlobongela obukhulu kwaye ungaphulukana nemali kutyalo-mali olwenzileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Kwelinye icala, ikwavula ithuba lokuba ungene intshukumo esele iqale kwaye ubushiyeke ngaphandle ngenxa yayo nayiphi na imeko. Njengoko ubona, ukuba luncedo kwayo yenye yeempawu zayo ezifanelekileyo kwaye unokusebenzisa ithuba ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Yintoni ukubuyela umva kunye nokuphosa umva?
Indlela yokungena kabini
I-Eurona sele ingaphantsi kwe-euro enye